Ny tanimboaloboka frantsay an'ny Occitanie
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny tanimboaloboka frantsay an'ny Occitanie
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Occitanie dia raisina ho iray amin'ireo faritra divay vaovao frantsay ary 2 ora miala an'i Barcelona no misy azy. Ny anarana ho an'ny faritra dia manondro fanjakana eropeana atsimo lehibe izay niresahan'ny olona fiteny avy any Latina antsoina hoe Occitan. Ity faritry ny tanimboaloboka frantsay ity dia mandrakotra faritany iray mitovy amin'ilay nanjakan'ny kaontin'i Toulouse tamin'ny taonjato faha-12 sy faha-13 ary manome morontsiraka Mediteraneana atsimo atsinanana ary mifanila amin'ny Provence-Alpes-Cate d'Azur atsinanana, Auvergne-Rhome Alpes amin'ny avaratra atsinanana, Nouvelle-Aquitaine eo andrefana sy avaratra andrefana ary mizara sisintany ivelany amin'i Andorra sy Espana atsimo. Ity faritra ity dia iray amin'ireo faritra divay tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo tanimboaloboka nambolena grika nanomboka tamin'ny taonjato faha-5 tal.
Ny faritra dia manambatra ny faritra manodidina an'i Languedoc-Roussillon sy Midi-Pyrenees, ary misy an'i Montpelier, Toulouse ary Perpignan. Io ihany koa no toerana nahaterahan'ny divay mamirapiratra (1531), ao an-tanànan'i Limoux, novokarin'ny moanina tao amin'ny Abbaye de Saint-Hilaire, 150 taona talohan'ny nahaterahan'i Dom Perignon izay nampiditra ireo sparkles tamin'ny faritra izay nampalaza azy - Champagne. Ny totohondry teo an-toerana dia nosoratan'i Thomas Jefferson ary io no hany divay namirapiratra tao amin'ny lakandranon'i Jefferson manokana.
Languedoc-Roussillon, dia nalaza ho “farihy divay” an'ny firenena satria namokatra betsaka divay betsaka ho an'ny miaramila frantsay nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Nandritra ny taona maro dia nahatonga ny divay mora indrindra ho an'ny firenena - ho an'ny tafika. Soa ihany, ny ezaka natao tato ho ato dia nifantoka tamin'ny kalitao noho ny habetsahana, ary nahomby io fiheverana io. Ny faritra dia misy tanimboaloboka 1 hektara ankehitriny (tany maro noho ny an'i Aostralia rehetra), namokatra divay 549,194 litatra (327,360,000 isan-jato mena, fotsy 75 isan-jato, 13 isan-jato nitombo, ary 8 isan-jato namirapiratra sy natanjaka / mamy). Amin'ireo divay ireo dia misy divay AOC 2 (mena sy fotsy 36 ary fotsy, 29 mamirapiratra ary 3 mamy).
Ny voaloboka nambolena be indrindra dia: Cabernet Sauvignon, Carignan, Cin assault, Merlot, Mourvèdre, Syrah, Grenache (noir and blanc), Muscat, Bourboulenc, Clairette, Mauzac ary Picpoul. Ny tany dia mifangaro amin'ny schist, sandstone, scree, vatosokay, tanimanga ary tanimanga-sandy. Antso malaza izay misy an'i Muscat de rivesaltes, Blanquette du Limoux, divay mamirapiratra, Corbiere, Minervois, Saint-Chinian, Pic Saint-Loup, Picpoul de Pinet ary Colioure.
VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL.